Shirkado Mashiin Baako Baako Baako Bacrimin Tijaabiye Laba-jibbaar ah iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Baakadaha Labaad ee Labaadleyda ah?
Ku Mashiinka Mashiinka Baakadaha Labaad ee Labaad waa makiinad wax lagu cabiro oo si otomaatig ah u baakoota kuna habboon hadhuudhka, digirta, bacriminta, kiimikada iyo warshadaha kale Tusaale ahaan, xirxirida bacriminta granular, galleyda, bariiska, qamadiga iyo miraha granular, daawooyinka, iwm. Marka loo eego shuruudahaaga, qiyaasta miisaanka xirmada waa 5kg ~ 80kg. Mashiinka cabbirka buuxinta iyo baakadaha ayaa inta badan ka kooban afar qaybood: miisaanka tooska ah, qalabka gudbinta, qalabka shandadaha bacda iyo kontoroolka kombiyuutarka. Waxay leedahay astaamaha qaabdhismeedka macquulka ah, muuqaalka quruxda badan, hawlgalka xasilloon, keydinta tamarta iyo miisaanka saxda ah. Mashiinka ugu weyni wuxuu qaataa laba-jibbaar wareegga wareegga, cabbirka laba-dhululubo ah, tiknoolajiyadda xakamaynta is-beddelka soo noqnoqda ee dhijitaalka ah, tiknoolajiyada farsamaynta muunadda iyo tiknoolajiyada ka hortagga faragelinta si loo gaaro magdhow qalad toos ah iyo saxitaan.
Naqshad loo qaabeeyey sida Shuruudahaaga Gaarka ah
Qalabka mashiinka ikhtiyaariga ah sida dalabkaaga: Birta kaarboon, birta birta ka sameysan oo dhan 304 / 316L, ama qeybaha taabashada alaabta ceeriin ah waa bir bir ah.
Astaamaha Mashiinka Baakadaha Xisaabinta Labaad
Qeexitaannada xirmooyinka waa la hagaajin karaa, hawlgalku waa iska fudud yahay isbedelka xaaladda shaqada.
Dhammaan qeybaha xiriir la leh walxaha waxay ka sameysan yihiin 304 bir bir ah.
Wadarta miisaanka xirmada iyo tirada boorsooyinka soo ururay.
4.Cunto gaar ah oo loogu talagalay quudinta iyo cabbiraadda, bacda iyo rarka isku mar. Waxay badbaadineysaa seddex meelood meel waqtiga hawlgalka, xawaaraha xirmada waa dhakhso, saxsanaanta baakaduna waa sarreysaa.
5.U adeegsiga dareemayaasha dibada laga keeno, kiciyayaasha pneumatic ee la soo dhoofiyo, shaqo lagu kalsoon yahay iyo dayactir fudud. Saxnaanta cabirka ayaa lagu daray ama laga jaray laba kun meelood.
6.Wide kala duwan oo tiro, sax sare, oo leh mashiinka tolidda xamuulka qaada oo la kicin karo oo hoos loogu dhigi karo miiska, hal mashiin waa ujeedo badan iyo waxtar sare.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Baakadaha Laba-geesoodka ah ee "Double Hopper"
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Baakadaha Laba-geesoodka ah
Culeyska Miisaanka (KG)
Qiimaha Tusmada Microscopic (kg)
Miisaan Kali ah
Model Qaas ah
≥100 Nidaaminta loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha
Faallooyin Mashiinka Baako otomaatiga ah
Mashiinka tolida, tirinta otomaatiga ah, goynta jumlada infrared, mashiinka ka saarida gees, waxaad ku dooran kartaa hadba shuruudaha macaamiisha Mashiinka Mashiinka Wareega Wareega ee Bacriminta
Alaabooyinka la xiriira>
Eeg alaabooyin badan
Guriga Compost Turner